“Ary aoka ho fantatrareo, ry rahalahy, fa izany Lehilahy izany no itoriana famelan-keloka aminareo.”Asan'ny Apostoly 13:38
Eny, mora tahak'izany! Tsy afaka ny hahazo famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ianao. Tsy afaka ny hanefa ny tambin'ny famelan'Andriamanitra ny helokao ianao. Ny fomba tokana hahazoanao an'io dia amin'ny alalan'ny finoana, fahasoavana ary famindram-pon'Andriamanitra ihany. Raha toa ianao ka te-hanaiky an'i Jesosy Kristy ho Mpamonjy anao sy homen'Andriamanitra famelan-keloka dia ity misy vavaka azonao atao. Ny fanaovana ity vavaka ity na vavaka hafa tsy hahavoavonjy anao. Ny finoana an'i Jesosy Kristy ihany no ahazoana famelan-keloka. Ity vavaka ity dia fomba iray fotsiny entinao manambara amin'Andriamanitra ny finoanao Azy sy entinao misaotra Azy noho ny famelan-keloka omeny anao. "Andriamanitra ô, fantatro fa nanota taminao aho ary mendrika ny ho saziana. Nefa i Jesosy Kristy nanefa ny sazy mendrika ahy mba ho voavela ny heloko amin'ny alalan'ny finoako Azy. Apetrako aminao ny fitokiako ho famonjena ahy. Misaotra Anao noho ny fitahianao sy ny famindram-ponao mahagaga! Amena!"
Moa ve ianao naka fanapahan-kevitra ho an'i Kristy noho izay novakianao teto?
Satria raha manaiky an'i Jesosy ho Tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin'ny maty, dia hovonjena ianao. Romana 10:9
Ireto dingana ireto ary no ataovy :
1. Makà antoka tsara fa azonao ny dikan'ny famonjena.
Milaza amintsika ny 1 Jaona 5:13 hoe “Izany no nosoratako aminareo, izay mino ny anaran'ny Zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo”. Irin'Andriamanitra ny hahazoantsika ny dikan'ny famonjena. Irin'Andriamanitra ny hahazoantsika antoka ny fahafantarantsika marina fa voavonjy isika. Ndeha horesahantsika fohifohy ireo lohahevitra manan-danja momba ny famonjena:
(a) Samy efa nanota avokoa isika. Samy efa nahavita zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra daholo isika (Romana 3:23).
(b) Noho ny otantsika dia mendrika ny saziana sy sarahana amin'Andriamanitra mandrakizay isika (Romana 6:23).
(c) Maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy nanefa ny sazy tambin'ny otantsika (Romana 5:8; 2 Korintiana 5:21). Maty nisolo voina antsika i Jesosy, nanefa ilay sazy mendrika antsika. Ny fitsanganany tamin'ny maty dia nanaporofo fa ny fahafatesan'i Jesosy dia ampy hanefana ny tambin'ny otantsika.
(d) Andriamanitra dia manome famelan-keloka sy famonjena ho an'ireo rehetra izay mametraka ny finoany amin'i Jesosy, matoky fa ny fahafatesany dia fanefana ny onitry ny otantsika (Jaona 3:16; Romana 5:1; Romana 8:1).
Izany no hafatry ny famonjena! Raha toa ianao ka efa nametraka ny finoanao amin'i Jesosy Kristy ho Mpamonjy anao, dia voavonjy ianao! Voavela ny helokao rehetra ary Andriamanitra mampanantena fa tsy handao na hahafoy anao Izy (Romana 8:38-39; Matio 28:20). Tsarovy fa, ao amin'i Jesosy Kristy, ny famonjena anao dia azo antoka (Jaona 10:28-29). Raha toa ianao ka matoky an'i Jesosy irery ihany ho Mpamonjy anao, dia afaka mahazo antoka ianao fa hiaina mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra any an-danitra!
2. Mitadiava fiangonana tsara izay mampianatra Baiboly.
Aza diso fihevitra hoe izany fiangonana izany dia trano be iray. Ny fiangonana dia ny olona. Tena zava-dehibe ny firaisankinan'ny mpino an'i Jesosy Kristy. Izany dia iray amin'ireo tanjon'ny fiangonana voalohany. Koa izao ianao nametraka ny finoanao amin'i Jesosy Kristy, mamporisika anao mafy izahay mba hitady fiangonana mino ny Baiboly eny amin'ny faritra misy anao ary miresaha amin'ny mpitandrina. Ampahafantaro azy ny finoanao vaovao an'i Jesosy Kristy.
Ny tanjon'ny fiangonana faharoa dia ny fampianarana Baiboly. Azonao atao ny mianatra ny fomba fampiharana ny anatranatr'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ny fianarana Baiboly no fanalahidy manokatra fiainana Kristianina feno fahombiazana sy mafy orina hiainanao. Hoy ny 2 Timoty 3:16-17 “Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra”.
Ny tanjon'ny fiangonana fahatelo dia ny fivavahana. Ny fivavahana dia fisaorana an'Andriamanitra noho izay nataony rehetra! Namonjy antsika Andriamanitra. Tia antsika Andriamanitra. Manome antsika izay ilaintsika Andriamanitra. Mitantana sy manoro-làlana antsika Andriamanitra. Ahoana no tsy hisaotra Azy isika? Andriamanitra dia masina, marina, be fitiavana, be indrafo, ary be fitahiana. Manambara ny Apokalypsy 4:11 “Hianao, Tomponay sy Andriamanitray, no miendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery; Fa Hianao no nahary ny zavatra rehetra, Ary noho ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy.”
3. Manokàna fotoana isan'andro hifantohanao amin'Andriamanitra.
Tena zava-dehibe ho antsika ny maka fotoana isan'andro hifantohana amin'Andriamanitra. "Fotoana mangina" no iantsoan'ny olona sasany izany. "Fanokanan-tena" hoy ny sasany, satria io dia fotoana iray anokanantsika tena ho an'Andriamanitra. Ny sasany misafidy ny manokana fotoana isa-maraina, ny sasany kosa misafidy ny isa-kariva. Tsy maninona izay iantsoanao io fotoana io na izay ora anaovanao azy. Ny zava-dehibe dia ny fakanao fotoana matetika hiarahanao amin'Andriamanitra. Inona avy no mameno ny fotoana irahantsika amin'Andriamanitra?
(a) Vavaka. Ny vavaka dia firesahana tsotra amin'Andriamanitra. Resaho amin'Andriamanitra ireo ahiahinao sy ireo olana mianjady aminao. Angataho Andriamanitra mba hanome fahendrena sy toro-làlana anao. Angataho Andriamanitra mba hanome anao izay ilainao. Ambarao amin'Andriamanitra ny halehiben'ny fitiavanao Azy sy ny fankasitrahanao izay rehetra nataony ho anao. Izany rehetra izany no mandrafitra ny vavaka.
(b) Famakiana Baiboly. Fanampin'ny fampianarana Baiboly anao any am-piangonana, ny Sekoly Alahady, sy/na ny fianarana Baiboly, dia mila mamaky Baiboly ny tenanao manokana. Ny Baiboly dia mirakitra izay rehetra tsara ho fantatrao mba hiainanao fiainana Kristianina feno fahombiazana. Voarakitra ao ny toro-làlana avy amin'Andriamanitra momba ny fomba fakana fanapahan-kevitra hendry, ny fomba ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra, ny fomba fitoriana teny amin'ny hafa, ary ny fomba fitomboana ara-panahy. Ny Baiboly dia Tenin'Andriamanitra amintsika. Ny Baiboly, amin'ny ankapobeny, dia boky mirakitra ny anatranatr'Andriamanitra momba ny tokony hiainantsika ny fiainantsika amin'ny fomba iray izay ankasitrahany sy mahafapo antsika.
4. Manorena fihavanana amin'ny olona izay afaka manampy anao eo amin'ny lafiny ara-panahy.
Milaza amintsika ny 1 Korintiana 15:33 hoe “Aza mety hofitahina ianareo; ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara". Ny Baiboly dia feno fampitandremana momba ny mety ho fianjadian'ny fitaoman'ny olona "ratsy" antsika. Ny fandaniana fotoana iarahana amin'ireo izay manao asa aman-draharaha feno fahotana dia hahatonga antsika ho voasariky ny fakam-panahy hanao ireo asa aman-draharaha ireo. Ny toetran'ny olona manodidina antsika dia "hamela tasy" amintsika. Izany no maha-zava-dehibe ny fifampikasohantsika amin'ny olona tia ny Tompo sy manolo-tena ho Azy.
Miezaha hahita namana iray na roa, avy ao amin'ny fiangonanao angamba, izay afaka hanampy anao sy hamporisika anao (Hebreo 3:13; 10:24). Angataho ireo namanao mba hiandraikitra ny fampahatsiahivana anao ny fanokananao fotoana mangina, ireo asa aman-draharahanao, ary ny dianao miaraka amin'Andriamanitra. Anontanio izy ireo sao mba afaka manao izany aminy koa ianao. Tsy midika izany hoe mila afoinao avokoa ireo namanao izay tsy mahalala an'i Jesosy Tompo ho Mpamonjy azy ireo. Tohizo ny fisakaizanareo ary tiavo izy ireo. Ampahafantaro azy ireo fotsiny fa nanova ny fiainanao Jesosy ary tsy afaka manao ireo zavatra rehetra fanaonao taloha ianao. Angataho Andriamanitra mba hanome anao fotoana hahafahanao mizara an'i Jesosy amin'ireo namanao.
1. grace 29/08/2017
Ny loharanon-kevitra rehetra dia ny fisoratana anarana amin'ny teny hafa,
Raha ny marina,
Jika Anda dia nanoratra tamin'ny banky ary nanoratra,
Tadiavo ny tenimiafinao hanova ny tenanao Anda,
Raha te hahafantatra ireo lahatsoratra hafa ianao, dia afaka manoratra izay tiany hatao.
Nametrahan-dRamatoa Maureen tao amin'ny Maureenwiwik@gmail.com,
Manomboka amin'ny 1 ora hariva ny Rupiah amin'ny 48 ora.
Ny lehibe indrindra amin'ny sembana dia 1-5%.
Ho an'ny mpampiasa Twitter dia mametraka ny lisitry ny lahatsary !!
Manorata mailaka an-tserasera amin'ny mailaka
Ny vola miditra dia mividy EUR 2000-900000 sy Payment Term
(1-30 taonina) ho an'ny mpividy.
Hubungi: Gracemorganloancompany@gmail.com na BMM = D8E91A28
2. ALBAKER (site web) 15/09/2017
ANDRO VOALOHANY NY OLONA AMIN'I IPOH MALAYSIA
NY FIANGONANA NY FIANGONANA NY FIANGONANA I FAMINANIANA IZY IZY IZY. ANDRIAMANITRA MAHATSIARO AN'ANDRIAMANITRA ANDRIAMANITRA ANJARA JOSE LUIS LOAN.
I Abdullah no anarako Nidina avy any an-tanànan'i Ipoh i Malezia nitady ara-dalàna nandritra ny dimy volana lasa, hividy trano
Ny zava-drehetra izay azoko dia sakaizamihamehy izay nahatonga ahy hatoky azy ireo ary amin'ny farany
tamin'ny andro, naka ny volako ry zareo nefa tsy nanome na inona na inona ho setr izany
Very ny fanantenako, very hevitra aho ary diso fanantenana, tsy te hiditra amin'ny orinasam-bola Internet aho, noho izany dia nandeha nitaky vola avy amin'ny
namana, nambarako taminy ny zava-drehetra ary nilaza fa afaka manampy ahy, izany
Fantany ny orinasa iray izay afaka manampy ahy amin'ny karam-bola rehetra
bola avy aminy, izy no nitarika ahy amin'ny fomba fangatahana famindram-bola, nataoko
Tahaka izay nolazainy ahy, dia nampihariko tamin'izy ireo tamin'ny mailaka: (albakerloanfirm@gmail.com) tsy nino aho fa nanandrana aho
Ny mahagaga ahy indrindra dia nahazo ny trosa tao anatin'ny 24 ora, tsy mino aho,
Ny orinasa tahaka izao dia mbola misy eto amin'ity aterineto ity,
Azafady, manoro hevitra ny olona rehetra fa mila trosa
(albakerloanfirm@gmail.com) dia tsy mahomby na oviana na oviana, ary
dia hiova tahaka ny nataoko ny fiainanao. Azonao atao ny mifandray (albakerloanfirm@gmail.com) androany ary azonao atao ny mividy azy ireo, Andriamanitra dia mitahy ny ara-bola nataon'i Albaker noho ny fanoloran-tena azy marina.
Ataovy azo antoka fa mifandray amin'ny orinasa Albaker ianao noho ny trosanao satria mahazo ny loka azafady avy amin'ity orinasa ity nefa tsy misy fiatrehana
3. Mr Josh Hawley 06/10/2017
4. Mr Josh Hawley 06/10/2017
Je suis M. Josh Hawley, un prêteur de prêt personnel qui offre un prêt de possibilités de vie à des particuliers, des institutions, des organisations, etc. juste à un taux d'intérêt de 2% sans garantie ... Avez-vous besoin d'un prêt immédiat pour rembourser votre dette ou avez-vous besoin d'un prêt pour améliorer votre entreprise? Vous avez été rejeté par les banques et autres institutions financières? Avez-vous besoin d'un prêt de consolidation ou d'une hypothèque? Toutes vos inquiétudes sont terminées parce que nous sommes ici pour que tous vos problèmes financiers soient une chose du passé.
Contactez-nous par courrier électronique (Joshhawleyloanfirm@gmail.com) pour plus de détails ..
5. Ardan Clooney 16/10/2017
[b]We offer fresh cut bank instrument for lease, such as BG, SBLC, MTN, Bank Bonds, Bank Draft, T strips and others. Leased Instruments can be obtained at minimal expense to the borrower compared to other banking options. This offer is opened to both individuals and corporate bodies.
6. margi 06/12/2017
7. fred 18/12/2017
8. Muhammed Emir Harun 09/01/2018
9. Wenzel Ronald Joseph (site web) 13/01/2018
TOKONY HATAO VE? AT 3% TSY AZO AMPIASAINA EMAILY. Mariho ny valiny rehetra dia tokony ho kopia ary alefaso amin'ity mailaka ity wenzelronaldjoseph@gmail.com wenzelronaldjoseph@gmail.com Full name .......... Bilaoty ilaina: .......... Loan Duration:. ......... taona: .......... Firenena .......... Fibodoana .......... Laharam-pahefana ..... ..... Wenzel Ronald Joseph
10. Jamesolsen Terrazas 19/01/2018
Thanks for your mail, the project DOA Agreement will be signed by both parties, buyer moves first and send back so provider can countersign before presenting to issuing bank for swift process.
The issuing bank is HSBC BANK UK and the Provider details will be presented on filling the DOA once buyers signs and send back.
The Form Irrevocable Corporate Refund Undertaking will be signed by the Provider and Notary officer to legally bind both parties together and ensure no party fails in its duty and obligations.
As Intermediary and mandate to the buyer, you are entitled to 1.5% Open and mandate to buyer which i am is entitled to 0.5% closed.
We ensure brokers are 100% paid and healthy commission are paid fro every transaction.
Please find the Attached DOA to be signed.
11. albaker (site web) 15/02/2018
Tena nalahelo ahy ny vadiko raha vao niditra tao amin'ny mpitsara ara-bola izahay ka nananatra ny fangatahanay ho nanao bankirompitra, dia tsy nanana vola firy izahay fa nandefasana ny zanakay vavy ho any amin'ny oniversite izay tsy azonay aloa. Manara-maso ny fampindramam-bola hividianana vola (orinasa mpanao fampindramam-bola), izay nanampy ny olona tahaka anay, mahazo fiovàna fiantohana. Ny orinasam-pifandraisanay tsirairay dia naniry ny volany teo aloha teo amin'ny $ 1,000 ka hatramin'ny $ 2,000 izay tsy ho vitantsika. Satria nieritreritra izahay fa tsy manana fanantenana ny hisafidy ny hivarotra na hamoy ny tranonareo amin'ny fanakatonana azy. Avy eo aho dia nahita gazety iray tao an-toerana ary ny fonony dia Loan Bonding Corporation. Ireo dingana telo lehibe; 1. Manolotra fampiharana elektronika ianao. E-mail: albakerloanfirm@gmail.com 2. Mametraha fomba tsara hamantarana ny maha-olom-pirenena anao ny karatra maha-olom-pirenena na ny fahazoan-dàlana mitondra fiara sy ny kaonty amin'ny banky. 3. Ny trosa dia arotsaka, ankatoavina ary alefa. Nihena ny tantara lava, nanampy tamin'ny fidiram-bola izy ireo tamin'ny 4% ary novana tamin'ny fanavaozana. Nomeny ihany koa ny zanany vavy mba hanomezana antoka ny mpianatra mba hamenoana ny karamako feno. Niara-niasa tamin'ny fampindramana an'i Lasson izahay, izay nampitandrina anay momba ny fivoaran'izao tontolo izao. Izy no nanao ny taratasy rehetra, antso an-telefaona, sns. Nanao izany daholo izy rehetra ary nahazo trosa izay ekentsika. Rehefa manaiky ny fepetran'ny fampindramam-bola aho ary nanolotra ny antsipirian'ny bankiko, dia nandoa ny vidiny sarobidy ho an'ireo tolotra ireo aho. Tsy ho azontsika ho tsotra sy azo ekena izany raha tsy tamin'ny alalan'ny dingan-dàlany tamin'ny fahalalantsika. Tsy manam-potoana hisaotra anao aho, Misaotra anao! Tsy afaka nanontany ekipa tsara kokoa aho. Miakatra ny vidin-tsolika. Ny tsara indrindra ho anao, mifindra trano Raha misy olana toy ny anay, midira amin'ny orinasa mpitrandraka trosa. Afaka miasa izy ireo. Ankasitrahan'i Timoty sy i Maria natao ny 16 Febroary 2018 tao Columbus, GA
12. Maria Hernandez (site web) 27/02/2018
Veloma amin'ny rehetra mamaky ity,
Tsy nino mihitsy aho fa marina izany hatramin'izao fotoana izao, nahazo mari-pandaharam-bola 15.000.00 euro avy amin'i Maria Hernandez aho tamin'ny 3% ny tahan'ny zanabola. Ho an'ny fampindramam-bola haingana sy azo antoka dia mifandray amin'ity génie ity, ramatoa ny teniny. Izy no namonjy ny zanako vavy ary ankehitriny izy no manome azy betsaka araka izay nampanantenako azy fa hamela ny vahoakan'i Brezila sy izao tontolo izao hahalala ny asa soa ataony.
Azafady zarao izany eo anivon'ireo namana izay mila fanampiana ara-bola ny olona iray. Mifandraisa amin'i Maria Hernandez LOAN COMPANY amin'ny: anitabrenceloanfunds.usa@gmail.com
13. Keat Cheng 06/03/2018
14. Lenny Kaminsky 29/03/2018
15. Mr John Paul Nowacki 02/04/2018
16. Martin Steffens 12/04/2018
17. David Peterson 02/05/2018
18. charissa 01/06/2018
Tandremo! Hevitra !! Attention !!
Ny andro tsara ho an'ny isam-batan'olona rehetra dia fotoana iray niandrasanao.
Efa nomena alàlana tamin'ny orinasa mpanao hosoka imbetsaka ve ianao? Mila vola maika hividianana ny volanao ve ianao ?. Mila paosim-bola tsy azo antoka ve ianao? Mitady karam-barotra ve ianao? Bola manokana, trano fonenana, fampindramam-bola, fampindramam-bola ataon'ny mpianatra, fanofanana amin'ny fametrahana ny trosa, venture capital, sns. Nanokatra tahiry ara-bola ara-bola ho an'ny orinasa sy ny olona manana lanjany ambany sy mora azo 2%. Raha liana ianao handefa trosa maika? Azafady, mifandraisa aminay anio amin'ny alàlan'ny mailaka (charissaluther767@gmail.com) Via WhatsApp 00306997251819 ary mahazo ny saranao androany.
Misaotra anao noho ny fahatakaranao sy ny fiaraha-miasa.
19. John royster 06/06/2018
20. David Thomas 20/06/2018
21. Robert Francis (site web) 17/08/2018
22. Dr Bansal (site web) 30/08/2018
FAMONJENA TAMIN'OLONA: Ity dia hampahafantarina ny vehivavy sy ny vehivavy izay vonona hivarotra ny voa mba hifandraisana mivantana amin'ny "Hospital of Kidney Transplantation" satria manana marary izay eto ho an'ny fanomezana an-tsika.
Mitady fomba ahafahana manolotra ny reninao amin'ny vola ianao noho ny olana ara-bola? Hanolotra $ 530.000 ho an'ny voa ianareo. Izaho dia dokotera Bansal, nephrologista iray ao amin'ny hopitaly madio sy ny hopitaly, ary ny hôpitaly dia miresaka momba ny fambolena sy ny fitsaboana, dia hita any amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao toa an'i India, Aostralia, Nizeria, Emirà Arabo Mitambatra, US A ets. Tokony ho eo anelanelan'ny 18 ka hatramin'ny 55 taona ny mpanome am-bifotsy miaraka amin'ny vondrona A + ve, B + ve, ary O + ve. Raha liana, Alefaso amin'ny mailaka ny hopitaly: - (Nationalkidneyfoundation156) WhatsApp (+ 1-908-666-1264)
FANAMARIHANA: Azafady, ity dia mamela ny fiainan'ny hafa, noho izany dia manoro hevitra izahay fa manatona anay amin-kitsimpo izahay, tsy zaza izahay ... tsy azo atao ny mamily.
23. Dr Bansal (site web) 30/08/2018
24. Carson Noah 11/09/2018
25. Walsh Robert 13/09/2018
26. kelvinloans 17/10/2018
FIVORIANA MIARO ANAO, MITADIAVANA TOKONY TOKONY HO TSY MAHASOA ANAO OLON'I KRISTY IANAO.
Mankasitraka an'io orinasa io ato amin'ity orinasa ity izahay Manome vola manokana
ary ny fampindramam-bola ataon'ny banky ho an'ny 2% fotsiny, dia manolotra ny Loan
$ 4,000 dolara ho $ 5.000.000 dolara,
Raha mila trosa ho an'ny orinasa ianao na mandoa ny trosanao dia manorata amin'ny tenanao haingana araka izay tratra mba hanatsarana ny taratasy fangatahana fampiharana
MAHASOA ANKEHITRINY ETO MADAGASIKARA ny fangatahana fampiharana.
1. Anarana feno: ____________________
2. Telefono laharana: __________________
3. Firenena: ___________________
4. Firaisana: _____________________
5. Fibodoana: _______________________
6. Vola vola isam-bolana: ______________
7. Ny vola nindramina notakiana: ___________
8. Duration: __________________
Mifandraisa amin'ny birao amin'ny mailaka eto ambany Email: kelvinloans86@gmail.com
27. Walsh Robert 22/10/2018
28. Kelvin Faiz 08/01/2020
29. Kelvin Faiz 09/01/2020
30. Blaine Lorcan 25/04/2020